१३ औं सागका लागि तयारी द्रुतरुपमा भइरहेको छ : रिम रानाभाट « News24 : Premium News Channel
१३ औं सागका लागि तयारी द्रुतरुपमा भइरहेको छ : रिम रानाभाट
प्रकाशित मिति : Oct 02, 2019
काठमाडौं । नेपालले आयोजनाको जिम्मा पाएको १३औँ संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नजिकिँदै छ । मंसिर १५ गतेबाट काठमाडौँ र पोखरामा सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि अब तयारी रफ्तारमा बढाउन आवश्यक देखिएको छ । सागको आयोजना प्रतिष्ठाको विषय भएकाले पनि तोकिएकै समयमा संचालन गर्न नेपाललाई लागि चर्को दबाब छ ।
अहिले एकातर्फ सागमा सहभागी हुने विभिन्न खेलका खेलाडीको छनोट जारी छ भने अर्कातर्फ पूर्वाधार निर्माणको काम पनि चलिरहेकै छ । तर, पूर्वाधार निमार्णको प्रश्नले सागको आयोजना तोकिएकै समयमा हुन्छ कि हुदैन भन्ने शंका उपशंका पनि उत्पन्न हुन थालेको छ । नेपालले सहभागीता जनाउने वा आयोजना गर्ने जुनसुकै प्रतियोगिताका लागि पनि मुखैमा आएर तयारी थाल्ने परम्पराले नेपाललाई यसपटक सागको आयोजनामा हम्मेहम्मे बनाएको छ ।
यस अघि दुई पटक मिति सारिएको साग के अब तोकिएकै समयमा आयोजना होला त ? समग्र मुलुकको प्रतिष्ठासंग गाँसिएको यो प्रश्नअझै उठन भने छोडेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिस्तरका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली खेलाडीहरुको तयारी कस्तो भईरहेको छ ? के भौतिक पूर्वाधार निमार्णका काम समयमै सम्पन्न होलान ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर सागका राष्ट्रिय तयारी टिमका संयोजक रिम रानाभाटसंग टिभी जर्नलिष्ट वीरेन्द्र जैरुले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
कुराकानीको क्रममा संयोजक रानाभाटले १३ औँ संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताको सञ्चालनको लागि पूर्वाधारहरुको निर्माणका साथै नेपालको सहभागिता तथा उत्कृष्ट नतिजाको लागि खेलाडीहरुको प्रशिक्षणको सन्दर्भ र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सम्बद्ध संस्थाहरुले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । ( कुराकानी विस्तृत भिडियोमा)
नगरपालिकाले डेढ वर्षदेखि रोक्यो पोषण भत्ता, मुगुमा १२ वर्षदेखि जलविद्युत आयोजना अलपत्र (भिडियो)
क्यान्सर पीडित ७६ वर्षीया बृद्धासमेत मिटर व्याजको सिकार, श्रम कार्यालयको तीन दिनदेखि सर्भर डाउन, धेरैको प्लेन छुट्यो (भिडियो)
राजीनामा नदिने अडानका साथ डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे लाइभ, बसमा अश्लिल हर्कत गर्ने व्यक्ति समातिए (भिडियो)
access_time 11:42 am
बाँके, ६ माघ । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको
सुवास शर्मा लामिछाने कुश्मा, ६ माघ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित मेलमिलाप